क्यान्सरलाई जितेकी मनीषा कोइरालाले दिइन् क्यान्सरबाट जोगिने यस्ता टिप्स – Nepal Insider
मुख्य पृष्ठ /समाचार/क्यान्सरलाई जितेकी मनीषा कोइरालाले दिइन् क्यान्सरबाट जोगिने यस्ता टिप्स
म चिकित्सक होइन, तर म केही अवश्य भन्न सक्छु। भन्छन् नि, ‘रोग लागेर उपचार गर्नुभन्दा रोग नै लाग्न नदिनु बेस।’ भरसक हामी सचेत हुनुपर्छ कि हामीलाई क्यान्सर नलागोस्। त्यसको लागि रोग नि’रोधक जीवनशैली अपनाउन नै आवश्यक छ। मलाई आफ्नो अनुभवले पनि केही कुरा सिकाएको छ।मैले जोड दिएको कुरा के हो भने
रोग लागेर उपचार गरिसकेपछिको जीवनमा फेरि पनि त्यो रोग फर्केर नआओस् भन्नको लागि मैले गर्नुपर्ने क्रि’याकलाप हो। मैले अध्ययन गर्दै जाँदा हामीले भन्ने गरेको ‘हेल्दी लाइभस्टाइल’ को बारेमा म बोलिहाल्छु। हाम्रो श’रीर दिमाग, श’रीर र आ’त्माले बनेको हुन्छ। ‘शरीरलाई आहार खाना चाहिन्छ, जसमा अर्ग्यानिकलाई केन्द्रित गरिन्छ। यसमा खानासँगै श’रीलाई दिने आराम पनि आउँछ।
दिनमा ८ घण्टा सुत्नु भन्छन्, यो असाध्यै आवश्यक रहेछ। मैले पहिला धेरै धेरै काममा मग्न हुन्थे, नसुते पनि हुन्छ भन्थे। तर श’रीरलाई यो चाहिने रहेछ, धेरै मात्रामा आराम र निन्द्रा पनि। तर यो सँगै शरीलाई शा’रीरिक रुपमा स’क्रिय बनाउनु पनि उत्तिकै आवश्यक रहेछ। हामीले हाम्रो श’रीरलाई स्वस्थ्य राख्न अरु धेरै कुरामा पनि ध्यान दिन आवश्यक छ।
त्यसपछि आउँछ, दिमागी तन्दुरुस्ती। यो हाम्रो मनसँग जोडिएको कुरा हो। यो सकारात्मक छ कि खालि नकारात्मक काम कुरामा अल्झिरहन्छ? यो थाहा पाउन एकदमै जरुरी छ। समाचार हेरौँ त! धेरैजसो नकारात्मक नै आउँछ। कता कता मलाई लाग्छ, हामी मानिसहरु नकारात्मतातर्फ अग्रसर भईराखेका छौँ। त्यसैले हामीले पहिला आफैँले आफैँलाई मूल्यांकन गर्न आवश्यक छ। र यो आफूमा भर पर्ने कुरा हो,
कसरी सकारात्मक हुने। मलाई लाग्छ, कसैको पनि जीवनमा स’मस्या नआउने हुँदैन। समस्या आउँछ भने, त्यहाँ पक्कै पनि समाधान पनि आउँछ। समस्यामा उल्झन हैन, स’माधानको बाटो हिड्न खोजौँ। सकारात्मक दृष्टिकोण भयो भने जीवनलाई विभिन्न आयामबाट, दृष्टिकोणबाट हेर्न पनि जानिन्छ।
भन्छन् नि, ‘जीवनलाई आधा खालि भएको देख्ने कि आधा भरिएको देख्ने।’अब आयो आध्यात्मिक पाटो। यसमा अदृश्य शक्तिको विश्वास हो। यसमा तपाईँले जुन ध’र्म, संस्कृतिलाई अपनाउनु हुन्छ, त्यही नै महत्वपूर्ण हुन्छ। ध्यान, साधना, योगाजस्ता कुरा यहाँ पर्न आउँछ। मलाई लाग्छ, मानव जीवनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष पनि यही हो।
यदि यी सबैको बिचमा सद्भाव र सन्तुलन भयो भने र यसलाई नियाल्दै गएमा तपाईँलाई के आवश्यक छ भन्ने बारे तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ मैले प्रस्तुत गर्न खोज्ने मुख्य विषयवस्तु पनि यही हो, कि कसरी हामी स्वस्थ्य जीवनशैली अपनाउन सक्छौँ?तर सत्यता के हो भने, यो कुरा हामीलाई थाहा हुँदाहुँदै पनि हामी बिरामी परेपछि मात्र हाम्रो स्वास्थ्यलाई ख्याल गर्न थाल्छौँ।
हामीलाई थाहा छ, स्वास्थ्य भएन भने हामी जीवनमा आएका कुनै पनि खुसीहरुमा रमाउन सक्दैनौँ।यसको लागि हामीले हाम्रो स्वास्थ्यलाई प्राथमिकताको केन्द्रमा राख्न जरुरी छ।यदि स्वस्थ्यकर जीवनशैली अपनाउँदा अपनाउँदै पनि हामीलाई क्या’न्सर भइहाल्यो भने पनि आत्तिहाल्नु पर्दैन। यहाँ एकदमै पोख्त चिकित्सकहरुको टोली छ, बस तपाई उहाँहरुको स’म्पर्कमा आउनुपर्छ।
नआत्तिकन पूर्ण विश्वासका साथ उपचार गर्नुहोस्।मेरो बारेमा भन्नुपर्दा त्यो चौथो तहको क्या’न्सर थियो।तर भगवान ममाथि दयालु भए, मेरा चिकित्सक उत्कृष्ट थिए, मलाई मेरो परिवारको एकदमै ठूलो स’मर्थन थियो। त्यो सबैले मलाई उपचारमा सहयोग गर्‍यो। अहिले म क्या’न्सरमुक्त भएको छु र एकदम ठीक छु।
अहिले ७ वर्ष भयो।क्यान्सर हुनु मृ’त्युदण्ड होइन, क्यासरपछि पनि जीवन छ। केही छैन भने पनि आशा छ। मलाई लाग्छ सायद क्या’न्सरपछि जीवन अझै राम्रो हुन्छ। म क्या’न्सर अगाडिको जीवन भन्दा अहिले उत्तम जीवन जिउँछु। पीडा भइसकेको मान्छेले, भोगेको मान्छेले सचेत भएर जीवन जिउँछ।
पीडामा नभएको र दुख नउठाएको मान्छेले अलिकति ला’परवाह जीवनशैली जीउने रहेछ। क्या’न्सरले मलाई स्वस्थ्य जीवन जीउनु अति आवश्यक रहेछ भन्ने बोध गरायो र जीवनलाई रमाएर जिउन सिकायो। सुचना दैनिक बाट।
न बोल्न सक्छिन्, न त सुन्न : तैपनि उपाधि होडमा सुजल ! सबैले १ शेयर गरेर सहयोग गर्नुहोस !
लोकप्रिय अभिनेत्री निरुता सिंहको आज जन्मदिन, बिहानैदेखि शुभकानाको ओइरो
विश्व बैंकले गर्यो कुलमान घिसिङको प्रसंशाः नेपालको प्रगति संसारभर गर्व गर्न लायक